कोभिडविरूद्ध प्रभावकारी हुनसक्ने नयाँ औषधिको बेलायतमा परीक्षण गरिँदै – Himalaya Television
२०७७ पुष ११ गते २०:२७
११ पुस २०७७ लण्डन । बेलायतका वैज्ञानिकहरूले कोभिड–१९ बाट आपतकालीन रक्षा गर्न सक्ने विश्वास गरिएको एउटा औषधि विकास गरिएको बताएका छन् । यद्यपि उक्त औषधि हाल परीक्षणको क्रममै रहेको बताइएको छ ।
बेलायती औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको एन्टिबडी उपचार औषधि खासगरी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आइसकेका र खोप दिन ढिलो भइसकेका मानिसमा उपयोगी हुनसक्ने बताइएको छ । सङ्क्रमित विरामीलार्ई यो औषधि दिँदा कोभिडको गम्भीर बिमारी हुनबाट जोगाउन सकिने ठानिएको छ । अहिले यो औषधि अन्तिम चरणको परीक्षणमा रहेको बताइएको छ । यो चरणअन्तर्गत पहिलो १० व्यक्तिलाई बेलायतमा उक्त औषधिका मात्रा दिइएको छ ।
यो परीक्षणमा सहभागी गराइएका प्रमुख समूहहरूमा स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, अस्पतालमा रहेका बिरामी तथा दीर्घकालीन उपचारसेवामा रहेका आश्रितहरू रहेका स्वास्थ्य विज्ञहरूले जनाएका छन् ।
प्रभावकारी पाइएमा सुईमार्फत् दिइने यो औषधिले खोप लगाउन नभ्याइएका वा नहुने जोखिम वर्गका मानिसलाई रक्षा गर्ने ठानिएको छ । साथै यसले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न पनि सघाउने ठानिएको छ ।
बेलायतको यूनिभर्सिटी कलेज लन्डन हस्पिटल्स (यूसीएलएच) एनएचएस ट्रस्टमा भइरहेका परीक्षणमा दुई भिन्न प्रकारका एन्टिबडी तत्त्वहरूलाई सुईमार्फत् दिँदा कोभिडको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूलाई बिरामी हुनबाट वा कम्तीमा सिकिस्त बिरामी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ कि भनेर हेरिनेछ । कोरोनाभाइरसको सम्पर्कमा आएमा व्यक्तिलाई तत्काल खोप दिएर यसले काम गर्न केही साता लाग्ने तर यो औषधिले अपेक्षाकृत सफलता पाएमा उनीहरूका लागि यो वरदान बन्नेमा विज्ञहरूले आशा देखाएका छन् ।
एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको यो मनोक्लोनल एन्टिबडी उपचारले तत्काल त्यस्ता भाइरसलाई निस्तेज बनाउन थाल्छ । अनि यसले कम्तीमा एक वर्षसम्म उक्त व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने औषधि नार्माता कम्पनीका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
औषधि कोभिड परीक्षण बेलायत
वैशाखमै खानेपानीको हाहाकार ! जेठमा के होला ? २०७८ वैशाख ७ गते ९:४९
भारतमा तेस्रो चरणको खोप अभियानको तयारी, पूर्वप्रधानमन्त्री सिंह अस्पताल भर्ना २०७८ वैशाख ७ गते ९:३२
कर्णालीमा आज सार्वजनिक बिदा २०७८ वैशाख ७ गते ९:१५
देशका केही पहाडी भूभागमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुन सक्ने सम्भावना २०७८ वैशाख ७ गते ९:१०
सतर्कतासहित निरन्तर सेवा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन २०७८ वैशाख ७ गते ९:०५
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक आज बस्ने २०७८ वैशाख ७ गते ८:५९
आज पनि भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै २०७८ वैशाख ७ गते ८:५०